ZenCash စျေး - အွန်လိုင်း ZEN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ZenCash (ZEN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ZenCash (ZEN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ZenCash ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $89 490 831.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ZenCash တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ZenCash များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZenCashZEN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$9.55ZenCashZEN သို့ ယူရိုEUR€8.04ZenCashZEN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£7.26ZenCashZEN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.8.69ZenCashZEN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr85.71ZenCashZEN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.59.9ZenCashZEN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč211.57ZenCashZEN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł35.52ZenCashZEN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$12.7ZenCashZEN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$13.21ZenCashZEN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$213.86ZenCashZEN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$74.02ZenCashZEN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$51.13ZenCashZEN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹715.95ZenCashZEN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1610.85ZenCashZEN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$13.08ZenCashZEN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$14.31ZenCashZEN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿297.22ZenCashZEN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥66.41ZenCashZEN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1007.38ZenCashZEN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩11316.86ZenCashZEN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3634.19ZenCashZEN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽700.94ZenCashZEN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴264.68
ZenCashZEN သို့ BitcoinBTC0.000806 ZenCashZEN သို့ EthereumETH0.0241 ZenCashZEN သို့ LitecoinLTC0.159 ZenCashZEN သို့ DigitalCashDASH0.093 ZenCashZEN သို့ MoneroXMR0.102 ZenCashZEN သို့ NxtNXT683 ZenCashZEN သို့ Ethereum ClassicETC1.33 ZenCashZEN သို့ DogecoinDOGE2650.91 ZenCashZEN သို့ ZCashZEC0.0957 ZenCashZEN သို့ BitsharesBTS363.04 ZenCashZEN သို့ DigiByteDGB348.62 ZenCashZEN သို့ RippleXRP31 ZenCashZEN သို့ BitcoinDarkBTCD0.321 ZenCashZEN သို့ PeerCoinPPC33.02 ZenCashZEN သို့ CraigsCoinCRAIG4241.36 ZenCashZEN သို့ BitstakeXBS396.94 ZenCashZEN သို့ PayCoinXPY162.46 ZenCashZEN သို့ ProsperCoinPRC1168 ZenCashZEN သို့ YbCoinYBC0.005 ZenCashZEN သို့ DarkKushDANK2984.91 ZenCashZEN သို့ GiveCoinGIVE20146.99 ZenCashZEN သို့ KoboCoinKOBO2091.5 ZenCashZEN သို့ DarkTokenDT8.8 ZenCashZEN သို့ CETUS CoinCETI26864.66
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 18:25:02 +0000.